MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Cusbitaalka Qudus Ee Hargeysa Oo Laga fuliyay Qalliin Noociisu Ku Cusub Yahay Somaliland
(Hadhwanaagnews) Tuesday, January 29, 2013
Mareeyaha Cusbitaalka Qudus ee ku yaala duleedka Huteelka Maan-soor ee Magaalada Hargeysa, Kayse Cabdi Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay qaliinkan noociisu ku cusub dalka Somaliland ee ay ka fuliyeen Inankan yar ee labada Carab lahaa
Hargeysa(HWN):- Cusbitaalka gaarka loo leeyahay ee Qudus ee Magaalada Hargeysa, ayaa Dhakhaatiirta ka hawl-gashaa waxay ku guulaysteen qalliin ay sheegeen in noociisu ku cusub yahay Somaliland, kaasoo ay ku sameyeen Wiil yar oo lix sano-jir ah, kaasoo Carrabkiisa caadiga ah Fiix Carrab labaad noqotay kaga taallay muddo dhawr sano ah, taasoo sababtay inaanu hadli karin, isla markaana cuntada si caadi ah u isticmaali karin.
Mareeyaha Cusbitaalka Qudus ee ku yaala duleedka Huteelka Maan-soor ee Magaalada Hargeysa, Kayse Cabdi Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay qaliinkan noociisu ku cusub dalka Somaliland ee ay ka fuliyeen Inankan yar ee labada Carab lahaa iyo waxyaabaha ay ka fuliyaan Cisbitaalka Qudus waxaanu yidhi?Runtii Cisbitaalka Qudus oo immika Dalka Somaliland ka hawl-galaayey muddo saddex sanno ah. Runtii bulshadeena waad ka warhaysaan wakhtigu wuu adag yahay saddexdii bilood ee ugu danbeeyay waxaanu dadka siinaynay qaliino bilaasha, markaa qaliino badan oo kala nooca ayaa na soo maray oo ay ka mid yihiin Qaliino xabeetida ah iyo qaar Fiixo laga jaraayey oo way farabadnayeen runtii. Baahida Caafimaadka ee Dadku sida uu yahay immika waanu ku warhaynaa iyo sida uu yahay oo dad badan ayaanu u shaqayna anaga oo fulinayna qaliino bilaasha.
”Waxaannu immika qalliin ku samaynay Wiil yar oo da?diisu tahay 6 jir, halkaas Carabka hoostiisa ayay fix ka soo baxday waxaanu ahaa reer miyi oo waxa la soo mariyey Cisbitaalo badan oo waxba ka qaban-kariwaayey. dhakhaatiirta Qaliinyada ka fulisa Cisbitaalka Qudus oo ah dhakhaatiir Ruushiyaana oo taququs ku ah qaliinka ayaa waxay ku guulaysteen inay Inankii yaraa ay Fiixdii ka qalaan. Waxaana ku adkaa cinista iyo haddalka oo markii aloo keenay muu hadlijirin. Immika wax ay kaga tagtay oo xannuuna majiraan. Markaa waxa laga fuliyaa Cisbitaalka guud qaliinka dhalinta iyo shaybaadhka oo waxaanu fulinaynaa qaliino bilaasha oo waanu siiwadaynaa.?Ayuu yidhi Mareeyaha Kayse Cabdi Axmed.
Aabbaha Wiilkan lix jirka ah ee qalliinka lugu sameeyey dhalay oo magiciisa la yidhaahdo Xuseen Maxamed Aw Saraar, ayaa sheegay in Wiilkiisan uu hayay muddo shan bilood ah, isla markaana uu soo mariyey Cisbitaalo iyo dhakhaatiir badan oo ku yaala Magaalada Hargeysa, kuwaas oo uu tilmaamay inay dawooyin u qorijireen, isla markaana xaaladiisa Caafimaad waxba ka badeliwayday , isaga oo dhacdadaas ka hadlaayana waxa uu yidhi.?Ilmuhu markii hore wuu yara xannuusaday oo halkaas Carabka hoostiisa ayay wax ka soo baxeen, markii aan arkay inay wax ka soo baxeen ayaan dhakhatiirta soo qabadsiiyay dabadeed waxaan keenay laba dhakhtar oo Magaalada Hargeysa. Labadii dakhtar Waxay ii qoreen dawooyin oo kaliya waxayna igu yidhaahdeen dawooyinkaas oo kaliyasii. Dabadeed Dawooyinkii ay u qoreen waxba way ka tariwayeen.
”Kabacdi markii danbe ayaan u soo gudbay dhakhtarkan oo nalooga waramay in dhakhtar qaliinka ah halkan joogo ee Qudus. Dabadeed markii aanu keenay Cisbitaalkan Qudus ayuu sawiray oo dhigiina wuu ka qaaday iyo Cadhuuftiina marka uu ka qaaday intaas,?Ayuu yidhi Aabaha dhalay Wiilkan yar ee lagu sameeyay qaliinka aan hore looga fulin dalka Somaliland.”
Aabbaha dhalay Wilkan yar Xuseen Maxamed Aw-Saraar, waxa uu intaa ku sii daray oo yidhi; ?Waxa uu yidhi markii horeCarabka waxyar ayaa ka muday oo waa Fiix, waxaasna way ka bilaaban tahay ayuu yidhi. Dabadeed waxa uu yidhi waan qalayaa, markaa sidaas ayuu ku qalay. Muddo shan Bilood ah waxan Inanka yar wuu ku yaalay intaan dhakhaatiirta wareejinaayay oo waxaan u tagay dhakhaatiir badan oo waxba ka qaban waayey arrinta. Immika waxa uu Cisbitaalka Qudus Fiifay muddo toban habeen ah dabadeed immika wakaas Inankii Caafimaaday ee bugsaday. Waxa laga soo jaray waxwayn oo aad ka yaabisid inta u leeg yahay ayaa laga soo jaray oo xitaa leh badhidiid. Waxaana uu ka balaadhnaa Carabkiisa oo waxba muu cunikarin, waxaana uu lahaa midabka Carabka oo muu hadlikarayn oo wuu taqalanaa. Gacanta lagu qalay waxay ahayd bilaash, markaa dhakhaatiirta kale ayay ku baxday lacag badan ee waxba ii qaban. Aad ayaan ugu faraxsan nahay oo wakaas maanta wax cunaaya ee soconaaya. Anigu waxaan ka keenay miyi oo ciddaan arko waan u soo tilmaamayaa dhakhtarkan Qudus. Waxaana shacabka Somaliland ugu baqayaa inay dhakhaatiirtani tahay qaar gacantoodu barakaysan tahay.?
Dr. Amiir Cabdiraxmaan oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Ruushka, isla markaana ah Dhakhtarka qalay wiilkan lix jirka ah oo aanu wax ka waydiinnay qaliinnadan aan hore looga fulin jirin Somaliland sida ay ugu guuleysteen iyo waxyaabaha u sahlay, ayaa sheegay in markii loo keenay Wiilkan Fiixdu Carrabka labaad u samaysay ay Xaaladdiisa caafimaad adkayd, isla markaana hadalka iyo cunto liqiddu ku adkayd. Hase-yeeshee, markii ay Baadheen ka dib ay guda-galeen qalliinkiisa toban cisho ka hor. ”Wiilkan Fiix baa ka soo baxday Carrabka hoostiisa, taasoo leekayd ama ka waynayd Carrabka caadiga ah muuqaal ahaan iyo midab ahaanba, Illaahay mahaddii waannu ku guulaysannay qalliinka aannu wiilkan lix jirka ah ku samaynay oo aannu Illaahay iyo Aqoontayada la kaashannay.” sidaa ayuu yidhi Dr. Amiir Cabdiraxmaan.
Dr. Amiir, waxa uu intaa ku sii daray oo yidhi; ”Maanta waad arkaysan Wiilkan yari sida uu u caafimaad-qabo ee hadalka iyo cuntadubu ugu furan yihiin, waxaanan idiin sheegayaa in Cusbitaalkan Qudus qalliinnada noocan oo kale ah iyo kuwo badan oo kale-ba lagu fulin karo, waana Illaahay mahaddii in aannu Somaliland ka samayno hawlgallo caafimaad oo noocan oo kale ah.”
Abdiqani A. Ahmed (Aspro)
Hadwanaag News Reporter